I-BugHerd: Khomba, cofa usebenze kwiWebhu | Martech Zone
Nantsi into ebalulekileyo kuwe… ungathini ukuba ungadibanisa inkqubo yolawulo lweprojekthi kunye nezichazi esikrinini ukwenza kube lula ukunika ingxelo ngemicimbi kunye nokwenza imisebenzi kwiwebhu? Akukho zabelwana zesikrini, ezibuza malunga neenguqulelo zebrawuza, okanye ukuzama ukucacisa imiba echazwe ngumntu ongengobuchwephesha. Ungathini xa unokuvula nje usetyenziso lwesikhangeli, ukhombe, ucofe kwaye uxele umba kwindawo yakho ngokuthe ngqo kwiqela lakho lewebhu okanye iarhente?
Ngoku unako-nge BugHerd. I-BugHerd ikunceda ukuba ubambe ingxelo, usombulule imiba, kwaye ulawule iiprojekthi zewebhu ngaphandle kwamandla. I-BugHerd ijika izichazi zesiza kwiingxelo zegciwane ezinamandla kunye nayo yonke idatha oyifunayo ukulungisa nawuphi na umba. Ukubona kukukholelwa:
Nazi ezinye zeempawu zeBugHerd
Ikhonkco ngqo kwimicimbi -Gcina ixesha ngokutsiba ngqo uye kuloo ngxaki.
Unamathiselo lwefayile -Faka iifayile ezongezelelweyo ezinje ngee-specs, iigodo okanye i-mockups.
Idatha yokukhetha epheleleyo -Umkhethi opheleleyo wemicimbi exeliweyo, eyenza ukuba ukusombulula iingxaki kungabinazintlungu.
Iingxoxo zexesha lokwenyani -Nxibelelana usebenzisa isibonelelo sexesha lokwenyani.
Izikrini ezizenzekelayo Izandiso zebrawuza ziqhotyoshela ngokuzenzekelayo ii-skrini.
Ukumakisha ngaphakathi -Ukucwangcisa kunye nokubeka ingxelo yakho, imiba kunye nezicelo zenqaku.
Isikhangeli kunye ne-OS - ibhalwe xa umcimbi uxeliwe.
Ubungakanani besikrini kunye nesiGqibo Sombulula imiba yoyilo ngobungakanani befestile kunye nesisombululo.
Unxibelelaniso kunye Github, Icandelo.io, JIRA, I-Basecamp kunye neCampfire, Zendesk kwaye Hlaziya kwakhona
tags: 37signalsBasecampbugherdUmlilo wasekampiniIntsebenziswanouyilo lwentsebenziswanoGitHubJiraulawulo lweprokjekthiHlaziya kwakhonaIcandelo.ioulawulo lomsebenzikuyilo webzendesk
Izinto ezibekiweyo ezingama-200 kwiAlgorithm kaGoogle
Juni 5, 2013 ngo-10: 55 AM
I-BugHerd ikunceda ukuba ubambe ingxelo, usombulule imiba, kwaye ulawule iiprojekthi zewebhu ngaphandle kwamandla.
Juni 10, 2013 ngo-1: 04 PM
Ndihlala ndimangalisiwe ziindlela ezininzi ze-SaaS ezikhoyo kule mihla. Imiba emininzi yeshishini inabancedi abancinci.
Juni 19, 2013 ngo-5: 12 AM
Ukuba iphila ngokuvisisana nesithembiso sayo, kufanelekile ukuba uyixabise. Unamava wokuyisebenzisa, iDouglass?